Bandhigga buugaagta Hargaysa oo diiradda saaraya mustaaqbalka - Sabahionline.com
Bandhigga buugaagta Hargaysa oo diiradda saaraya mustaaqbalka Waxaa qoray Barkhad Daahir oo Hargaysa joogaa
Bandhigga caalamiga ah ee Buugta Hargaysa waa meel ka ballaaran in kaliya laga helo buug -- hadda oo uu marayo sannadkii shanaad, ayuu bandhiggu waxa uu marti-gaaliyay qoraayaal, abwaano, film-sameyayaal, muusikiistayaal, jilayaal, saxafiyiin, mu'allifiin, iyo fanaaniin ka kala yimid Somaliland iyo dibaddaba. Dadka kasoo qeb-galay bandhigga oo u kuur-galaya 500 oo buug oo lagu soo qaddimay bandhigga. [Barkhad Daahir/Sabahi]
Bandhiga farshaxanimada ee nabbada iyo horumarka oo ku soo gabagabooyay magaalada Hargeysa
Masrixii qaranka Soomaaliya oo u baahan taageero degdeg ah
Doodda midnimada Soomaaliya oo sii socota iyada oo wareeg cusub oo wadahadal ah ka furmayo Ankara
Xad-gudubyada kadhanka ah xoriyadda saxaafadda oo sii kordhaysa Somaliland
Sannadkan, 30 qof ayaa la marti qaaday oo ka kala yimid dalalka caalamka, sida Maraykanka, Ingriiska, Ruushka, Sweden, Finland iyo dalal kale, sida uu sheegay Jaamac Muuse Jaamac, oo ah qoraa iyo maamulaha Mu'assasadda Badda Cas (Redsea Online Culture Foundation), oo soo agaasimay bandhigga lixda maalmood soconaya isagoo la agaasimay Xarunta Kayd ee Fanka iyo Dhaqanka Soomaaliyeed (Kayd Somali Arts and Culture) iyo ururro kale oo maxalli ah. Badhiggaa buugaagta ayaa lagu qabtay Naadiga Ragga oo ku yaala bartamaha Hargaysa intii u dhaxaysay 13-kii illaa 18-kii July, iyadoo hal-ku-dhagg looga dhigay, "Wehesho buugaagta". Wasiirka dhalinyarada, cayaaraha iyo dhaqanka Somaliland Cali Siciid Raygal ayaa khudbaddiisi furitaanka ka sheegay in bandhigga uu calaamad u yahay horu-marka Somaliland, dhacdooyinka caykan oo kalena ay muhiim u yihiin in sawir wanaaggsan laga faafiyo gobolka. Waa muhiim in lala dagaalamo jahliga, aqoon-darada, shaqo la'aanta, tahriibinta dadka iyo dhibaaooyinka kale si loo hubiyo horu-marka Somaliland, ayuu yiri.
Abwaanka wayn ee Soomaaliyeed Maxamed Ibraaim Warsame Hadraawi ayaa ku dhiirri-galiyay kaasoo qeyb-galayaasha bandhigga in ay milicsadaan farriinta bandhigga, ayna ka faa'idaystaan fursadda lasoo bandhigay. Jaamac ayaa Sabahi u sheegay in gabadha haysata dhalashada Ingiriiska laakiin asal ahaan Soomaalida ah Nadiifo Maxamed, ahna qoraaga buugga "Black Mamba Boy", oo loo tarjumay in ka badan 10 luuqadood ay kasoo qayb-gashay bandhigga sannadkii seddeexaad.
Mary Harper,oo ah tifaftiraha BBC Afrika, ahna qoraaga buugga "Getting Somalia Wrong?" ayaa sidoo kale kasoo qayb-gashay bandhigga, waxaa sidoo kaae kasoo qeyb galay Dr. Georgi Kapchits, oo ah cilmi-baare Raashiyaan ah oo luuqadda Soomaaliga bartay 40 sano kahor, qorayna sideed buug oo isugu jira maahmaahyooyin iyo sheekooyin Soomaaliyeed ah. 5,000 oo buug ayaa lagu soo bandhigay carwada, sida uu sheegay Jaamac. Qaar kamid a buugaagta ayaa loogu deeqi doonaa maktabaadaha, halka qaar kalena ay beec ahaayeen, oo ay ku jireen buugaag cusub oo Soomaali iyo Inglishba ku qoran.
Dhacdaada sannadkan waxaa sidoo kale ka qeyb-qaatay suugaanta asliga ah ee reer Galbeedka, oo beec jaban la iibinayay, si dhaalinta yar fursad loogu siiyo in ay akhriyaan buugaag ka hadlaya dhaqanno kale, ayuu yiri Jaamac. "Muhiimaddeenna koowaad, marka lagu daro soo bandhigidda buugaagta, waxa ay tahay in aan bulshada Somaliland ka dhigno kuwa wax qori-akhrin kara, buugaagna soo saarta" ayuu yiri.
Iyadoo qeyb ka ah dadaallada Redsea Online Culture Foundation ee xoojinta wax akhrinta iyo qorista, ayay maktabad wareegta booqatay Boorama, Berbera, Sheekh, Burco iyo Ceeri-gaabo intii u dhaxaysay 2-dii illaa iyo 9-kii July. "Muhimadda koowaad waxa ay ahayd in dhallinta ay galaangal u helaan buugaagta, maxaa yeelay wax maktabado ah kuma yaalin aagaggii aan booqanay," ayuu yiri Jaamac. Dhallinta oo u baahan Maktabado dadwayne
Yaasiin Calase, oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Hargaysa, ayaa sheegay in aysan jirin maktabado iyo buugaag-cilmiyeed ku qoran af-Soomaali. "Waxaa jira kaliya hal maktabad oo dowladdu leedahay oo ku taalla Hargaysa, ardaydana waxa ay u baahanyihiin maktabado dheeri ah," ayuu yiri. Calase ayaa sheegay in 20-kii sano ee lasoo dhaafay, inta badan buugaagta ay qoraan Soomaalida ay ka hadlayeen suugaan qaddiim ah, aysanna jirin buugaag cilmiyeed lagu daabacay luuqadda maaxalliga ah. Waxa uu sheegay in dadka aqoonta lihi looga baahanyahay in ay luuqadda Soomaaliga ku tarjumaan buugaagta cilmiga ah si lo kordhiyo tirada maktabadaha dadka u furan iyo in galaangal loo helo in buugaagta lagu faafiyo gobollada dalka. "Kaliya hal mid ayaa si wayn uga qeyb qaadan karta aqoonta, waana akhrinta aad luuqaddaada ku akhriso, tanina waxa ay abuuri kartaa dhaqan wax akhrin ah," ayuu yiri Calase. Muxuu kula yahay qoraalkan?
July 21, 2012 @ 12:41:29AM
Waxaa loo baahanyahay in Somaliland laga sameeyo maktabado guud oo bulshada u adeegta, waayo maktabadahaasi waxay noqon karaan meelo ay bulshadu ku kaydiso wixii cilmi, taariikh, luuqad iyo dhaqan ah. Sidoo kale, waxay noqon karaan meelo dadku isku bartaan kuna wada xidhiidhaan, kana helaan buugaag iyo jaraa’id, isla markaana ay tacliin ka helaan is dhex galna ku sameeyaan. Waxay kalo noqon karaan meelo ay dadku si bilaash ah ugu isticmaalaan kombiyuutarada, kuwaasoo ay shaqooyin ku raadsan karaan, ama nasasho kula qaadan karaan asxaabtooda, amaba ay wax kaga ogaan karaan taariikhdooda, dhaqankooda iyo wixii la halmaala. Sidaa awgeed, maktabadahani waa inay noqdaan qaar badhtamaha kaga yaal bulshada ay u adeegaan. Hadaanu nahay maamulka jaamacadda Golis, waxaano soo jeedinay in la hirgaliyo maktabad guud oo bulshadu yeelato, taasoo jaamacadayada iyo meelaha kale ee wax laga barto iyo bulshada reer Somaliland ba ay ka heli karaan adeegyada maktabadaha iyo wixii la midka ahba. Mashruucani wuxuu awood u leeyahay inuu saamayn wayn ku yeesho dadka oo ay dhaqan u yeeshaan wax akhriska, waxaanuu wax ka tari karaa oo uu kor u qaadi karaa heerka farbarashada bulshada. Markaa waxaan soo dhawaynaynaa ciddii nagula shuraakoobaysa mashruucan maktabada bulshada ah.
July 19, 2012 @ 05:19:27AM
Waxaa aad loogu baahanyahay in la helo maktabado guud oo magaalooyinka laga hirgaliyo, oo laga dhigo sidii ay ahaan jireen xiligii isticmaarku joogay. Aniga waxaa maskaxdayda gali la’ sida ay siyaasiyiintu dadka ugu booriyaan inay wax akhriyaan, isla markaana ay dadka saboolka ah ka hor joogsadaan inay helaan macaluumaadka iyo cilmiga.